Home Wararka Markab rakaab ah oo ka badbaaday burcadeed Soomaaliyeed
Markab rakaab ah oo ka badbaaday burcadeed Soomaaliyeed
Sida ay sheegayaan wararka naga soo gaarayo badda Soomaaliya, dhowr maalin ka hor inta aan lasoo saarin meelaha halista badan ee Badweynta Hindiya, Kooxaha Burcad badeedda Soomaalida ayaa weeraray Markab sida ku xusan Warbixin kasoo baxday Howlgalka Midowga Yurub ee la dagaalanka Burcadda NavFor.
Sidoo kale Xarunta Howlgalka Navfor ayaa waxaa ku soo dhacday digniinta ah in Koox saaran Doon yar ay u dhawaatay Markabka Anotlia, waxa ay ku furtay rasaasta qoryahaha fudfudud & kuwa culus ee garbaha laga tuuro Baasuuke/Saban (RPG).
“Weerarkaas waxaa fuliyay afar ruux oo la socday doon yar oo ah kuwa dheereeya, waxa ay weerareen markabka oo ay damacsanayeen in ay qafaashaan si ay uga helaan Madax-furasho balse gurmad degdeg ah ayaa gaaray oo ka socda howlgalka EU NavFor” Ayaa lagu yiri bayaanka kasoo baxay howlgalkaas.
“Kaddib markii weerar & iska caabbin is dhaafsadeen Ilaalada Markabka iyo Burcadda oo ugu yaraan muddo saac dagaalamay, Burcaddu way ku guuldareysatay in ay gacanta ku dhigto, si nabadgalyo ah ayuu Markabka ku gaaray Dekedda Muqdisho” ayaa lasii raaciyay bayaanka.
Xafiiska Baddaha Caalamiga (IMB) ayaa sheegay in wixii ka dambeeya 1-da September 2021 oo ku beegan Arbacada Todobaadka soo socda in dib loo howlgelinayo ciidamada ilaalinta nabadgalyada badda si ganacsiga uu isugu gudbo Geeska Afrika loona dhimo awoodda Burcadda.
Laga soo bilaabo 2010 waxaa hoos u dhac ku socday awoodda Kooxaha Burcad Badeedda, howlgalka la dagaalanka kooxdaas ayaa taako-taako ula socda Maraakiibta iyo Doomaha ganacsiga & Dalxiiska iyaga oo qaarkood wata ilaalo kooban si ay ugu sii simaan inta gurmadka ay dirsadaan usoo gaarayo.